Ny 'Association Européenne pour l’Etude et la Conservation des Lémuriens (AEECL)' dia fitambaranan’ny vala-java-boahary eropeanina sy ny anjerimanontolo, ny tanjona dia hiarovana sy hanaovana fikarohana mikasika ireo karazan’akomba atahorana ho lany taranaka.
Io fikambanana io dia tsy miankina ary naorin’ireo vala-java-boahary tao Mulhouse sy tao Cologne ary tao Saarbrucken sy ny anjerimanontolo tao Strasbourg. Ao Mulhouse France no misy ny foibeny ary ankehitriny dia mihitatra manerana ny eropa ireo mpikambana.
Ny fametrahana ny akomba manga maso na Eulemur macaco flavifrons anaty vala-java-boahary no anisan’ny lahara-pahamehana ho an’ny fikambanana.Notokanana tamin’ny taona 2007 ny vala-java-boahari-pirenena Sahamalaza Nosy Radama. Ny loko manga amin’ny mason’ilay akomba manga maso no entin’ny fikambanana mampiavaka azy. Niantomboka tamin’ny fiompiana sy ny fitehirizana anaty vala-java-boahary an’io akomba manga maso (Eulemur macaco flavifrons) io sy ny akomba (Eulemur coronatus) ary ny barimaso (Eulemur rubriventer) no nataon’ireo vala-java-boahary mpikambana izay nentiny tamin’ny sehatr’asa teo anivon’ny European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).
Inona no zavatra ataonay?
Akomba manga maso no filamatra
Ny bakomba manga maso dia “primates” ankoatran’ny olombelona izay manana maso miloko manga. Izany indrindra no nahatonga ny anarany ho akomba manga maso. Ao amin’ny saikanosin’i Sahamalaza no tena ahitana azy io. Amin’ny ilany avatra andrefan’i Madagascar no misy io toerana io.
I Sahamalaza dia toerana iray nosafidin’ny AEECL nanomboka tamin’ny taona 1988 mba hanaovana asa fikarohana sy fiarovana. Ny akomba manga maso izay amin’iny faritra iny ihany no tena ahitana azy betsaka no natao filamatra hanatanterahana ny asa rehetra momban’ny fiarovana amin’iny toerana iny.Efa aman-taonany maro no niarahan’ny AEECL sy ny MNP niasa mba hanaovana toerana arovana an’i Sahamalaza. Tanteraka ny tanjona voalohany tamin’ny taona 2001 raha voafidin’ny UNESCO ho “reserve de biosphere” i Sahamalaza. Tamin’ny taona 2007 dia lasa vala-java-boahari-pirenena i Sahamalaza.
Ny AEECL dia nanangana ivo toeram-piakarohana sy fiarovana ao Ankarafa, ala anisan’ny lehibe izay iainan’ny akomba manga maso. Io ivo-toerana io dia natao mba ahamora ny fikarohana izay ataon’ny mpianatra maro samihafa sy hanaovana asa fiarovana. Ny fikarohana izay novatsian’ny AEECL ara-bola dia mikasika ny vari-bolo (Hapalemur), ny fitsidika (Lepilemur), ny sifaka (Propithecus) ary momban’ny “cytogénétque” hamarinana ny sokajy izay tokony hisy ireo karazan-gidro ireo.Learn more...
Fandaran’asa mikasika ny fitantanana ny harena voajanahary sahanin’ny vondron’olona ifotony.
Mba hiarovana ny harena voajanahary dia maro ny fandaharan’asa mahasahana ny fampandrosoana sy ny fanabeazana ara-tontolo iainana irahana amin’ireo fokonolona ifotony. Voakasik’izany ny fambolena amin’ny ankapobeny, ny fambolen-kazo, ny fitantana afo, ny fianarana sy ny fanabeazana ary ny fanomezana rano fisotro madio.Learn more...
Fandaran’asan’ny vala-java-boahary eropeanina mikasika ny karazan’akomba atahorana ho lany taranaka (EEP)
Misy ny fandaharan’asa mikasika ny fiompiana sy ny fikarakarana ireo karazan’akomba ataon’ny vala-java-boahary eropeanina. Ny voakasika amin’izany dia ny akomba manga maso (Eulemur macaco flavifrons), ny akomba (Eulemur coronatus) ary ny red-bellied lemur (Eulemur rubriventer) izay eo ambany fanarahamason’ny EAZA. Natao io fitaizana anaty vala-java-boahary io mba ahafahana mijery sy manara maso akaiky ireo akomba ireo sy mba ahafahana mamerina azy ireo any amin’ny toerana misy azy tsirairay raha tokoa ilaina izany.Learn more...